Chanel ရဲ့ ဒေါ်လာ ၁၁၅၀ တန်ရှိတဲ့ Plastic Rain Hat
29 Mar 2018 . 4:19 PM
Chanel က မိုးရာသီဖက်ရှင်အတွက် ထီးမဟုတ်ဘဲ Plastic Rain Hat ကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်တဲ့နော်။ ဈေးနှုန်းကို ကြားရင် ဘုရားတတဲ့အထိကို အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှာပြောတဲ့အတိုင်း ဒေါ်လာ ၁၁၅၀ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ၁၅သိန်းရှိပါတယ်နော်။ မိုးကာ ပလတ်စတစ် ဦးထုပ်ကို ၁၅သိန်းဘယ်သူကပေးဝယ်မှာတဲ့လဲ? ဝယ်တဲ့သူမရှိဘူး မထင်ပါနဲ့။ ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးနှုန်းကခေါင်ခိုက်နေပါစေ၊ Chanel ကထုတ်တဲ့ ဘယ်ပစ္စည်းမဆို Celebrities တွေက အားပေးဖို့ အသင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကြီးရုံတင် အံ့သြဖို့ကောင်းတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
ဒီဇိုင်းအနေအထားနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဝတ်စားနေတဲ့ အကျီင်္တွေနဲ့ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် လိုက်ဖက်လွန်းလှနေတော့ ဘယ် Fashionista တွေကမှ စတိုင်မထုတ်ဘဲ ရှိုးမထုတ်ဘဲမနေနိုင်ကြပါဘူး။ ရိုးအီနေတဲ့ Fashion Item တွေထဲကနေ ကွဲထွက်သွားတာကြောင့်ပိုပြီး ကျော်ကြားသွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Plastic Rain Hat တင်မဟုတ်ဘဲ အခြား Plastic Accessories တွေလည်း ထုတ်လုပ်လို့ထားပါသေးတယ်တဲ့။ ဘယ်လို ဒီဇိုင်းတွေ ဘယ်လိုမျိုးချုပ်လုပ်ပြီးရောင်းချနေလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
Chanel တင်မဟုတ်ဘဲ Céline က ထုတ်တဲ့ ဒေါ်လာ ၅၉၀ တန် Plastic Bag ကလည်း Celebrities တွေကြားထဲမှာ ရောင်းထွက်လို့နေဆဲပါတဲ့။ ဒ့ါအပြင် Calvin Klein Brand ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ Plastic Coat ဟာလည်း Fashion World မှာ ​ဝတ်ဆင်နေကြဆဲပါတဲ့နော်။ Chanel ဆိုတဲ့ Brand တစ်ခုက ဘယ်လို Idea တွေ ဘယ်လို Design တွေကို ကြံကြံဖန်ဖန်နဲ့ပဲ ထုတ်နေပါစေ Chanel ဆိုတဲ့ Brand က ထုတ်နေတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေသမျှတော့ Celebrities တွေ၊ Fashionista တွေက အားပေးဆဲအားပေးမြဲဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chanel ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ယောက်ဆို ရင် သင်လည်း Plastic Rain Hat ကို ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံစုထားတော့နော်။
Reference : www.instyle.com
Chanel ရဲ့ ဒျေါလာ ၁၁၅၀ တနျရှိတဲ့ Plastic Rain Hat
Chanel က မိုးရာသီဖကျရှငျအတှကျ ထီးမဟုတျဘဲ Plastic Rain Hat ကို ထုတျလုပျလိုကျပါတယျတဲ့နျော။ ဈေးနှုနျးကို ကွားရငျ ဘုရားတတဲ့အထိကို အံ့သွသှားပါလိမျ့မယျ။ ဟုတျပါတယျ။ ခေါငျးစဉျမှာပွောတဲ့အတိုငျး ဒျေါလာ ၁၁၅၀ တနျဖိုးရှိပါတယျ။ မွနျမာငှနေဲ့ဆိုရငျ ၁၅သိနျးရှိပါတယျနျော။ မိုးကာ ပလတျစတဈ ဦးထုပျကို ၁၅သိနျးဘယျသူကပေးဝယျမှာတဲ့လဲ? ဝယျတဲ့သူမရှိဘူး မထငျပါနဲ့။ ဘယျလောကျပဲ ဈေးနှုနျးကခေါငျခိုကျနပေါစေ၊ Chanel ကထုတျတဲ့ ဘယျပစ်စညျးမဆို Celebrities တှကေ အားပေးဖို့ အသငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကွီးရုံတငျ အံ့သွဖို့ကောငျးတာလားဆိုတော့လညျး မဟုတျပွနျပါဘူး။
ဒီဇိုငျးအနအေထားနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျဝတျစားနတေဲ့ အကြီင်္တှနေဲ့ အံ့သွဖို့ကောငျးလောကျအောငျ လိုကျဖကျလှနျးလှနတေော့ ဘယျ Fashionista တှကေမှ စတိုငျမထုတျဘဲ ရှိုးမထုတျဘဲမနနေိုငျကွပါဘူး။ ရိုးအီနတေဲ့ Fashion Item တှထေဲကနေ ကှဲထှကျသှားတာကွောငျ့ပိုပွီး ကြျောကွားသှားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Plastic Rain Hat တငျမဟုတျဘဲ အခွား Plastic Accessories တှလေညျး ထုတျလုပျလို့ထားပါသေးတယျတဲ့။ ဘယျလို ဒီဇိုငျးတှေ ဘယျလိုမြိုးခြုပျလုပျပွီးရောငျးခနြလေဲဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့လိုကျရအောငျ။
Chanel တငျမဟုတျဘဲ Céline က ထုတျတဲ့ ဒျေါလာ ၅၉၀ တနျ Plastic Bag ကလညျး Celebrities တှကွေားထဲမှာ ရောငျးထှကျလို့နဆေဲပါတဲ့။ ဒ့ါအပွငျ Calvin Klein Brand ကနထေုတျလုပျတဲ့ Plastic Coat ဟာလညျး Fashion World မှာ ဝတျဆငျနကွေဆဲပါတဲ့နျော။ Chanel ဆိုတဲ့ Brand တဈခုက ဘယျလို Idea တှေ ဘယျလို Design တှကေို ကွံကွံဖနျဖနျနဲ့ပဲ ထုတျနပေါစေ Chanel ဆိုတဲ့ Brand က ထုတျနတေဲ့ပစ်စညျးဖွဈနသေမြှတော့ Celebrities တှေ၊ Fashionista တှကေ အားပေးဆဲအားပေးမွဲဖွဈနမှောပဲဖွဈပါတယျ။ Chanel ရဲ့ အမာခံပရိသတျတဈယောကျဆို ရငျ သငျလညျး Plastic Rain Hat ကို ဝယျဖို့ ပိုကျဆံစုထားတော့နျော။